Ruth Porat ရဲ့ အံသြစရာကောင်းလောက်အောင် အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားပုံတွေ | Duwun
ပေါ့ပျက်ပျက်နိုင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအဖို့ အတုယူ ပြင်ဆင်စရာကောင်းပါတယ်။
Google ရဲ့ CFO နေရာမှာ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Ruth Porat ဟာ ထက်မြက်ကျော်ကြားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သလို အမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အလုပ်ကိုလည်း တန်ဖိုးထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကျင့်ဝတ်တွေကိုလည်း ထားရှိသူပါ။ ပိုရတ်ရဲ့ အလုပ်ကျင့်ဝတ်တွေဟာ ပေါ့ပျက်ပျက်နိုင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအဖို့ အတုယူ ပြင်ဆင်စရာကောင်းပါတယ်။
၁။ မီးဖွားခြင်းကြောင့် အလုပ်ကို မထိခိုက်စေရ
New York Times မှာ ဖော်ပြခဲ့ပုံအရ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တုန်းက ပထမဆုံးကလေးကို မွေးဖွားချိန်မှာ ပိုရတ်ဟာ မီးနေခန်းထဲကနေတောင် client တွေကို ဖုန်းခေါ်နေခဲ့ပါသတဲ့။
၂။ ပြဿနာတွေကြောင့် မရပ်တန့်သွားဘူး
Ziff Davis နဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေး အစည်းအဝေးလုပ်တော့ ပိုရတ်က မတ်တပ်လည်းမရပ်နိုင် အခန်းထဲလည်း လှည့်ပတ်မသွားနိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ အခန်းထဲက စားပွဲပေါ် လှဲချပြီး သူမရဲ့ Presentation ကို ပြီးအောင် ဆက်ပြသသွားခဲ့တယ်။
၃။ ရင်သားကင်ဆာကြောင့် အလုပ်ချိန်မလျော့ခဲ့ဘူး
Big Think နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပိုရတ်ကိုယ်တိုင် ဖြေသွားတာ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တုန်းက ရင်သားကင်ဆာကြောင့် အလုပ်လျော့လုပ်ပြီး အိမ်မှာနားဖို့ ဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမက ငြင်းပယ်လိုက်တယ်။ " ကျွန်မအတွက်တော့ အလုပ်သွားတာဟာ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်ထိန်းချုပ်နေတာပါပဲ" လို့ ပြောတယ်။
၄။ "work-life balance." ဆိုတာ မယုံဘူး
အလုပ်ကြိုးစားသူပီပီ "work-life balance." ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပိုရတ်က လက်မခံဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲ့တာက အရှုံးသမားတွေအလုပ်ပဲလို့ Politico ကို ပြောခဲ့တယ်။ အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝ မျှတနေရမယ်ဆိုတဲ့ အမြင်အစား အလုပ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို ရောထွေးထားလိုက်တယ်။ အလုပ်ကိုလည်း ကိုယ်ပိုင်ဘဝလိုမျိုး ချစ်တယ်၊ ကြိုးစားတယ်။
၅။ Client နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အမြဲတမ်းအချိန်ပေးတယ်
ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ရော client တွေအတွက်ပါ နေ့ညမရွေး အချိန်ပေးသူပါ။ သူမလက်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Sarah P.Jones ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့မှာ " သူမတံခါးက အမြဲတမ်း မယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲ ဖွင့်ထားတာ။ သူမရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်က မိခင်တိုင်း ဖခင်တိုင်း သင်ယူသင့်တယ်"လို့ ရေးခဲ့ဖူးတယ်။
၆။ အိမ်ကို ရေချိုးရုံလောက်ပဲပြန်တယ်
၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းက ပိုရတ်ဟာ AIG ကို ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ အဖွဲ့ထဲက အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပါ။ အလုပ်ကို နေ့ရောညပါ လုပ်ခဲ့ပြီး ရေချိုးဖို့အတွက်ပဲ အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်တဲ့။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ FAnnie Mae နဲ့ Freddie Mac တို့ကိုလည်း ကူညီနေခဲ့သေးတာ။